लेखक ग्रेटा राणालाई ७ प्रश्न - संवाद - नेपाल
लेखक ग्रेटा राणालाई ७ प्रश्न
विश्वविख्यात नाटककार विलियम सेक्सपियर (सन् १५६४–१६१६)ले भौतिक संसार छोडेको चार सय वर्ष भयो तर उनका नाट्यकृति अझै संसारभर रुचिका साथ पढिन्छन् । उनका नाट्यकृति विभिन्न भाषामा अनुवाद गर्दै स्थानीयता अनुरुप मञ्चन पनि गरिन्छन् । सेक्सपियरका थुप्रै नाटकमध्ये सन् १५९०/१५९७ तिर लेखिएको मानिने अ मिडसमर नाइट्स ड्रिम एउटा चर्चित कमेडी हो । यही नाटक नेपाल ब्रिटेन सोसाइटीकी संस्थापक ग्रेटा राणा, ७४, को निर्देशनमा ३ देखि ५ कात्तिकसम्म ललितपुरको सानेपामा मञ्चन भयो । बेलायतमा जन्मेकी तथा दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपाल बस्न थालेकी राणाका आधा दर्जन आख्यान र आधा दर्जनै कविताकृति प्रकाशित छन् । डायमनशमशेर राणाको उपन्यास सेतो बाघलाई अंग्रेजीमा अनुवादसमेत गरेकी निर्देशक राणासँग गरिएको कुराकानी :
अ मिडसमर नाइट्स ड्रिम नै किन छान्नुभयो ?
यो नाटक मैले बाल्यकालमै पढेकी थिएँ । संसारका धेरै ठाउँमा धेरैपटक मञ्चन भइसकेको छ यो नाटक । यसको कथावस्तु र प्रस्तुतीकरणले मलाई जहिले पनि छुन्छ । मनोवैज्ञानिक कथामा हास्यचेतयुक्त प्रस्तुति छ यसमा ।
अंग्रेजीमै देखाउनुभयो, गाह्रो/सजिलो ?
विश्वकै साझा सम्पर्क भाषाका रूपमा विकसित भइसकेको अंग्रेजी भाषा नेपालमा अब धेरै नै प्रचलित भइसकेको छ । अंग्रेजीमै देखाउन खासै गाह्रो भएन । सेन्स अफ ह्युमर र इमोसनहरू सबै भाषामा उस्तै हो । भाषा मात्रै फरक हो, भाव उही हो संसारभर ।
कति समय तयारी गर्नुभयो ?
अगस्टदेखि सोचिरहेकी थिएँ । एक महिना अभ्यास गरियो । दिव्य देव र आकांक्षा कार्कीले निर्देशनमा मलाई सहयोग गर्नुभयो । उहाँहरूले अभिनय पनि गर्नुभएको छ । नाटकमा सगुना शाह, आशान्त शर्मा, सरोज अर्याल, आभास कर्मा, गुञ्जन दीक्षित, उत्पल झा, चिराग बाङ्देल, चन्द्रप्रकाश बुढामगर, मनोज बस्नेत, अजित शर्माजस्ता कलाकारले अभिनय गर्नुभयो ।
नाटकबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो ?
धेरै नै उत्साहजनक । हाउसफुल भयो । नाटक हेरिरहँदाका दर्शकको अनुहार र भावभंगिमा हेर्दा खुसी भएँ म । सेक्सपियरकालीन अंग्रेजीमा खासै फरक नगरिए पनि अस्पष्ट भएन । कलाकारहरूको लगनशीलता र अभिनयको प्रशंसा म मात्रै होइन, दर्शकले पनि गर्नुभयो ।
नेपाली नाटक पनि पढ्नुभएको छ ?
हो, मैले वासु शशी, बालकृष्ण समका केही नाटक पढेकी छु ।
म बेलायतमा जन्मे पनि नेपालमा बस्न थालेको ४५ वर्ष भएछ । आख्यान र कविता विधामा संलग्न छु । सामाजिक काममा पनि सक्रिय भइरहेकी छु ।
अनुवादको योजना पनि छ कि ?
माया ठकुरी, दौलतविक्रम विष्टका नेपाली पुस्तक पनि पढ्छु । हेरौँ, समय कम छ कि मेरो ? के के भ्याउँछु ! यो समय अब तपाईंहरूजस्ता युवाहरूको हो ।
प्रकाशित: मंसिर ९, २०७३